Oganda: Ilay Fanomezana Jobily Volamena Izay Tsy Tontosa Mihitsy · Global Voices teny Malagasy
Oganda: Ilay Fanomezana Jobily Volamena Izay Tsy Tontosa Mihitsy	Voadika ny 17 Oktobra 2012 5:42 GMT
Zarao: Raha mbola mankalaza ny faha-50 taonan'ny fahaleovantenany i Oganda ny 9 Oktobra 2012, mba nanantena ny tsirairay fa ho fanomezana lehibe tsara indrindra ny fandresena amin'ny fiadiana ny ho Tompondakan'i Afrika. Mbola tsy tanteraka anefa izany.
Nanamarika i Patrick Mugumya fa faly tamin'ity faharesena ity ny mpanao gazety sasany:
@mugumya: Araka ny efa fantatra, faly ny mpanao gazety sasany fa resy ny ekipam-pirenena. Mampahonena tanteraka #UgandaCranes
@mugumya: Miarahaba #Kampala Mino aho androany fa hiadi-hevitra tsara isika momba ny #UgandaCranes aza ampidirina amin'izany i Sevo, mbola tsy nilalao tamin'izany izy ary tsy hilalao mihitsy
Nanome tsiny ireo mpanohana nitondra akoho velona teny amin'ny kianjabe i Tumwebaze Josephe:
@jobaze: Hitako ihany hoe iza no omena tsiny amin'zao faharesen'ny Uganda Cranes izao. Tsy faly tamintsika ireo akoho velona nentin'ny mpanohana!pic.twitter.com/VujcSdbo
Midika izao fa tia manao fety be loatra ny Ogandey, mampiseho i Assumpta Nalubega fa efa nifantoka tamin'ny fampisehoan'i Sean Paul ny sain'ny Ogandey sasany:
@mnalubega: Satria efa resy ny #ugandacranes ankehitriny, miandry tapakila amin'ny fampisehoana ataon'i #SEAN PAUL ny sasany!! Nahazoako lesona izany:-) @SemuGoma
Nihevitra i Proggie Uganda fa tokony hanamboatra kianja vaovao i Oganda satria mbola tsy nandresy mihitsy isika tao amin'ny kianjan'i Namboole:
@proggiug: Mila manamboatra kianja vaovao isika. Tsy mbola naharesy mihitsy isika teo. RT @oleebranch: Kianja Mandela. Tranon'ny #UgandaCranes http://instagr.am/p/Qy1oQXImjg/
Efa resy ny ekipa nasionaly Ongadey amin'ny baolina kitra, Uganda Cranes tamin'ny lalao Tompondakan'ny ekipam-pirenena Afrikana tamin'ny taona 1978, efa tafakatra tamin'ny lalao famaranana izy saingy resy ary nitàna ny laharana faharoa. Mifanakaiky ny fiverenan'ny tantara tamin'ny taon-dasa ny ekipa.